Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Ny Amerikanina dia maniry faran'izay kely ny sidina amin'ny sidina
Airlines • Airport • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • culinary • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany • Divay & Fanahy
Maherin'ny antsasaky ny Amerikanina (59%) no mihevitra fa tokony hapetraka ny fetran'ny alikaola azon'ny olona sotroina amin'ny sidina.
38% no mieritreritra fa tokony ho voarara tanteraka ny alikaola.
1/3 manomboka ny fisotroan-drononony misotro amin'ny sidina.
41% no mino fa ny fandraràna ny alikaola dia hampihena ny isan'ny ady hevitra ao anaty sidina.
Ho an'ny Amerikanina maro, na dia eo aza ny andro, ny fombafomba fialan-tsasatra matetika dia manomboka amin'ny labiera eny amin'ny seranam-piaramanidina.
Raha ny tena izy, tsy mahazatra ny mahita andiana vakansy milentika tavoahangy misy labiera na toaka alohan'ny mitataovovonana.
Rehefa nesorina ny fameperana hidin-trano manerana ny firenena, maro ny olona mety ho faly kokoa amin'ny fety, milaza fa 'mihoby' amin'ny fahalalahana.
Mazava ho azy fa be dia be ny fotoana eny an-dàlana, manomboka amin'ny bara seranam-piaramanidina eo an-toerana, mankany amin'ny labiera fidirana ary mazava ho azy, zava-pisotro rehefa tonga ao amin'ny trano fandraisam-bahiny misy ny hotely.
Na izany aza, isika rehetra dia samy namaky tantara tamin'ny vaovao sy tao amin'ny media sosialy ny mpandeha fiaramanidina voatery notarihan'ny fiaramanidina fiaramanidina noho izy ireo somary diso tafahoatra.